မောင်ရစ် – ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မေမေကြီး | MoeMaKa Burmese News & Media
စာရေးဆရာမကြီး ခင်မျိုးချစ် (၁၉၁၅ – ၁၉၉၉)။ ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ကွယ်လွန်ခြင်း အမှတ်တရဆောင်းပါး
ကျွန်တော်တို့အဖွားကို ကျွန်တော်က မေမေကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်။ ဘယ်တုံးကစပြီး ကျွန်တော့် မေမေကြီးကိုမှတ်မိသလဲ စဉ်းစားလိုက်တော့၊ ကျွန်တော်တို့ပုံပြင်တွေ နားထောင်တတ်ခါစအရွယ်၊ ၄၊၅နှစ် သားပေါ့၊ ကျွန်တော်တို့ဆိုတာက၊ ကျွန်တော့်မှာ(၅)မိနစ်ငယ်တဲ့ အမွှာညီမတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ကျွန်တော် တို့ကို ရင်ခွင်မှဖြစ်စေ၊ ဘေးတစ်ဘက်တစ်ချက်မှာဖြစ်စေထားပြီးတော့ ပုံပြင်တွေမြောက်မြားစွာ ပြောပြ ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒါကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေတယ်။ တိုင်းရင်းသားပုံပြင်၊ နိုင်ငံရပ်ခြားပုံပြင်၊ ရာဇ၀င်ဒဏ္ဍာရီ၊ ဗုဒ္ဓ၀င် နှင့် ဘုရားဟောဇာတ်တော်တွေအများကြီးပါပဲ။ ခုတော့အသေးစိတ်ဘယ်သတိရနိုင်ပါ့မလဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအချိန်ကစပြီး ကျွန်တော်တို့မှာ ပုံပြင်ပြောတဲ့ အဖွားတစ်ယောက်ရှိပြီဆိုတာ စတင်သိရှိခဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က မေမေကြီးလို့စတင်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွားဟာ သာမန်ရိုးကျအဖွားတစ်ယောက်လို့ပဲ မှတ်ထင်ထားခဲ့တာပါ။ အခြားသူ တွေရဲ့အဖွားတွေနဲကတော့ ဘာမှမထူးခြားပါဘူးပေါ့။ မေမေကြီးဟာ ပိန်ပိန်ပါးပါး၊ မျက်နှာသွယ်သွယ်၊ ချွန်ထက်တဲ့နှာတံနှင့် စူးရှတောက်ပတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ သွက်လက်ထက်မြက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ဒါတွေကတော့ သူများနှင့်မတူတာအမှန်ပါပဲ။ ဒီထက်တော့အဆင့်မပိုခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့(၅)တန်းရောက်တဲ့အခါမှာ မေမေကြီးရဲ့ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်လာမှုတစ်ခု ပေါ်ပေါက် လာပါတယ်။ အချက်အလက်တွေ အမြောက်အများနဲ့ ကျောက်ခေတ်၊ သံခေတ်၊ ကျွန်ခေတ်၊ မြေရှင်ခေတ်၊ အရင်းရှင်ခေတ်ဆိုပြီး ခေတ်ကြီးတွေအကြောင်း တော်တော်ကိုရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးနဲ့ သင်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့စာမေးပွဲကျတယ်။ လစစ်တွေမှာပေါ့။ အဲဒီမှာမေမေကြီးက ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေကို လေ့လာဖတ်ရှုပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆွေးနွေးပါတယ်။ အချက်အလက်တွေကို ၀ါကျရှည်ကြီးတွေ နဲ့ မပြီးနိုင်မစီးနိုင် ရေးသားထားပုံရယ်၊ ဆရာမကိုယ်တိုင်က သင်ရိုးစာအုပ်အတိုင်း ရှည်ရှည်လျားလျား မှတ်စုထုတ်ပုံရယ်ကြောင့်လို့ ဝေဖန်ထောက်ပြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဘယ်နားလည်ပါ့မလဲ။
ဒီတော့မေမေကြီးက ကျွန်တော်တို့အတွက် သမိုင်းမှတ်စုတွေကို သေသေချာချာဖတ်ရှုပြီး ပြန်ရေး ထုတ်ပေးပါတယ်။ သူ့စာအုပ်စင်ပေါ်က၊ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာစာအုပ်ထူကြီးတွေရယ်၊ ရုပ်ပုံကားချပ်တွေရယ်ကို ထုတ်ပြ ကိုးကားရှင်းပြပါတယ်။ ပြီးတော့ကျောင်းက ဆရာနှင့်လည်း လာရောက်တွေ့ဆုံတိုင်ပင်ဆွေးနွေး ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အဖို့နောက်ပိုင်းမှာသမိုင်းကို ကျက်ရ၊ မှတ်ရ၊ လေ့လာရတာအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ (၅)တန်းကျောင်းသားဦးနှောက်ထဲကို စာပုဒ်လေ့လာကျက်မှတ်တဲ့နေရာမယ် အဆင့်ဆင့်အချက်အလက် ထုတ်၊ မှတ်စုတိုထုတ်၊ ရေးမှတ်ပြီးကျက်ဖို့ကို အကျင့်စွဲသွားအောင် မေမေကြီးက သင်ပေးခဲ့ပါတယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့ခင်ဗျာ။
နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ဘာသတိရသလဲဆိုတော့ မေမေကြီးက စာအုပ်တွေရေးတယ်။ ထုတ်တယ်၊ ကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့နားမလည်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်လိုစာအုပ်တွေပါ။ ကျွန်တော်တို့သိတာက စာအုပ်တွေထုတ်ရင် အဲဒီအသစ်အသစ်တွေကို ရှေ့မျက်နှာစာရွက်မှာ မြေးတွေအတွက်လို့ စာလက်မှတ် ရေးထိုးပြီးပေးတဲ့အခါ မလွတ်တမ်း၊ မပျောက်တမ်းတောင်းယူသိမ်းဆည်းရာတာကိုပါပဲ။ အဲဒီစာအုပ်တွေကို ဘဘကြီးကိုယ်တိုင် (ကျွန်တော်တို့အဖိုးပေါ့) ကားတစ်စီးငှားပြီး လိုက်လံဖြန့်ဝေရောင်းချလေ့ရှိတ်ာဆိုတာ ကိုလည်း မှတ်မိပါတယ်။
အဲသည်တုန်းက ထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေက ဘာတွေလဲဆိုတော့ “Colourful Burma”, “Anawrahta of Burma”, “Burmese Sence & Sketches” “Flowers & Festivals” ဆိုတဲ့ စာအုပ်တွေပါပဲ။ ဗမာပြည် အကြောင်း၊ ဗမာပြည်ရဲ့ရေမြေသဘာဝဓလေ့ထုံးစုံယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ ထေရ၀ါဒဗုဒ¨ဘာသာ မိတ်ဆက်တွေကို အင်္ဂလိပ်လိုဆောင်းပါးအဖြစ် စုစည်းထားတာတွေပါ။ အဲဒီကျမှပဲမေမေကြီးရဲ့ ကလောင်နာမည်က “ခင်မျိုးချစ်”ဆိုပြီး စတင်မှတ်မိတော့တာပါပဲ။ ခင်မျိုးချစ်ဆိုတော့လည်း ခင်မျိုးချစ်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ အတွက်တော့ မေမေကြီးဟာ မေမေကြီးပါပဲ။
အဲဒီအချိန်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ပျော်ကြရတာက မေမေကြီးကော၊ ဘဘကြီးပါ ကျန်းကျန်းမာမာ သွားသွားလာလာ ရှိနေချိန်၊ ပဲခူး၊ ပုသိမ်၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်းစတဲ့မြို့တွေကို အနှံအပြားအခေါက်ခေါက်အခါ ခါ သွားလာဘုရားဖူးထွက်ခဲ့ကြတာတွေ မနည်းပါဘူး။ အဲသည်မှာ ကျွန်တော်တို့အမြတ်တနိုး ၀ယ်ယူ သိမ်းဆည်းရတာတွေက ကျေးလက်ရိုးရာ၊ ယွန်းထည်၊ ၀ါးထည်၊ သစ်ထည်လေးတွေပါ။ ကွမ်းအစ်၊ ယွန်းဘူး၊ ပစ်တိုင်းထောင်၊ ဖိုးဝရုပ်စတာလေး ပြီးတော့ ဘုရားစေတီ၊ သမိုင်းဒဏ္ဍာရီတွေ၊ ဒါတွေကြားမှာ ကျွန်တော်တို့ပျော်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ကျွနတော်တို့တင်လားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ တခါတရံမှာ ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံအစဉ်အလာတွေကို တန်ဖိုးထားလေ့လာလိုတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေလည်း ပါပါတယ်။ သူတို့ကို မေမေကြီးက မြန်မာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံအစဉ်အလာတွေ ကို ကျေကျေညက်ညက် ရှင်းပြနိုင်ပုံရပါတယ်။ သူတို့တွေဆီမှာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာ့အလှအမှတ်တရတွေ တန်ဆာဆင်လို့ သူတို့နှစ်ခြိုက်ကြည်ညိုလို့၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မေမေကြီးက ဘယ်ဆိုးလို့လဲပေါ့။
မေမေကြီးက စကားပြောလည်းကောင်းတယ်၊ စာရေးလည်းကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ အဲသည်တုန်းက ယေဘုယျအားဖြင့် မှတ်ထားမိပါတယ်။ ခင်မျိုးချစ်ရဲ့မြေးတွေအဖြစ် ကျွန်တော်တို့ တဖြေးဖြေးနှင့် ဂုဏ်ယူတတ်လာကြပါတယ်။ မေမေကြီးဟာ လက်နှင့်လည်းစာရေးတယ်။ လက်နှိပ်စက် လည်းရိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာဓလေ့၊ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းတွေကို လိုက်လံလှည့်လည် လေ့လာပြန့်ပွားတဲ့အလုပ်ဆိုလည်း လက်မနှေးပါဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူရမှာပေါ့ မဟုတ်ဘူး လား။
ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်ရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီး၊ ကိုယ့်ရပ်ကိုယ်ရွာဓလေ့ထုံးစံ သီတင်း ကျွတ်တဲ့ကိစ္စ၊ သင်္ကြန်ကျတဲ့ကိစ္စတောင် ချေချေမြစ်မြစ်နားမလည်ဘဲ ကြီးပြင်းရတာမျိုး ကိုယ်ဘာသာ အယူဝါဒ၊ ဥပုဒ်စောင့်သီလယူတဲ့ကိစ္စ၊ ကိုယ်ရွတ်ဆိုနေတဲ့ ဘုရားစာအဓိပ္ပါယ် ရေရေရာရာမသိဘဲ အသက်ရှု နေရာမျိုးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကင်းဝေးခဲ့တယ် ဆိုရမှာပေါ့။ ကိုယ့်ရိုးရာအယူဝါဒကိုမှ ကိုယ်တန်ဖိုးထား နားမ လည်နိုင်ဘူးဆိုရင် အခြားသူစိမ်းဘယ်သူကမှ နားလည်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အရေးလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်သမိုင်း၊ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းမှလူဆိုတာ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂါတ်အတွက် မျှတစွာ ချီတက်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေက ကျွန်တော်တို့အရွယ်ရောက်ကာစ၊ ဆယ်နှစ်နဲ့ဆယ်သုံးလေးနှစ်ကြားမှာ အသိဝင်လာ ရတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မေမေကြီးဟာ မမျှော်လင့်ဘဲ ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးကွေ့ရပါတော့တယ်။ မေမေကြီးဟာ ဘယ်နေရာမှာမဆို၊ သူ့လက်သူ့ခြေနဲ့ အကုန်လုံးစနစ်တကျ လှလှပပလုပ်တတ်နေတတ် ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ခြံထဲဆင်းပြီး ပန်းပင်တွေကြည့်နေတုန်း မျက်နှာကနဖူးပြင်ကို ပျားတုတ်ခံရပါတယ်။ အဲဒီကစပြီး အနာဟာမပျောက်နိုင်တော့ဘဲ တစ်နေ့တစ်ခြားဆိုးရွားလာပြီး မျက်နှာတစ်ခုလုံးရစရာမရှိတော့ ပြန့်နှံ့လို့ပြည်တွေ သွေးတွေတရွှဲရွှဲနှင့် ဖြစ်လာရတော့တာပါပဲ။ အင်္ဂလိပ်ဆေး၊ ဗမာဆေး၊ ဘာနဲ့မှ မပျောက်ဘူး။ လူတောလည်း မတိုးနိုင်တော့ပါဘူး။ အိမ်ထဲမှာပဲ လူနာတစ်ယောက်လို အချိန်ကုန်ရပါတော့ တယ်။ သွက်လက်ထက်မြက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ခြေတွေလက်တွေ ရိုက်ချိုးလိုက်တဲ့အဖြစ်ပါပဲ။
အဲဒီမှာကြောက်စရာကောင်းတာက၊ မေမေကြီးရဲ့ ဒေါသနဲ့ မေမေကြီးရဲ့ မာနပါပဲ။ သည်လိုမျိုး ဖြစ်ရလေခြင်းလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒေါသဖြစ်တယ်။ သည်လိုမျိုးဖြစ်ရကောင်းလား၊ ဖြစ်စမ်း ဖြစ်စမ်းဆိုပြီး မာနကြီးကြီးနဲ့တင်းခံတယ်။ ခုချိန်မှာ ဒါတွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက် အမှောင်ကျတဲ့ကာလများ၊ မေမေကြိးအတွက်တော့ ငရဲခန်းကျတဲ့ ကာလများ။ သွားပြီး အကုန်လုံးပစ်လိုက်ရ ပြီ။ အားလုံးပစ်လိုက်ရပြီ။ နာတာရှည်ဝေဒနာသည် ဘ၀ကို မေမေကြီးစတင်ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပြီ။
ဒါပေမယ့်မေမေကြီးဟာ စာတွေဖတ်နေခဲ့တာပါပဲ။ စာတွေရေးနေခဲ့တာပါပဲ။ သူ့ဆီကိုလာနေကြ သေးတဲ့ ဧည့်သည်တွေနဲ့စကားလက်ခံပြောနေခဲ့တာပါပဲ။ တခါတရံမှာ ပစ္စည်းတွေပေါက်ခွဲပစ်၊ တခါတရံမှာ စာအုပ်တွေလွှင့်ပစ်၊ စိတ်ဝေဒနာ၊ ရုပ်ဝေဒနာများနဲ့ ငိုကြွေးရူးသွပ်၊ ကျွန်တော်တို့တွေလည်း မေမေကြီးနား က ခပ်ခွာခွာပဲနေထိုင်ပါတော့တယ်။
ဒါပေမယ့်မေမေကြီးဟာ ကျွန်တော်တို့နာမကျန်းတဲ့အခါများမှာ၊ ဘုရားစာ၊ တရားစာတွေရွတ်ဖတ် ပေးပါတယ်။ ပုတီးစိပ်ပေးပါတယ်။ တရားထိုင်ပါတယ်။ ငါ့လက်တွေကို ရိုက်ချိုးထားတယ်လို့ ဒေါသတကြီး ရေရွတ်နေရင်းကပဲ စာတွေကို မာနတကြီးနဲ့ ဆက်ရေးပါတယ်။ ဆက်ဖတ်လေ့လာပါတယ်။ ဒေါသတကြီး၊ မာနတကြီးနဲ့ ဆက်ပြီး အသက်ရှင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ဓာတ်စာဆရာကြီးဦးစောမောင်နဲ့ တွေ့တဲ့အခါမှာ မေမေကြီးရဲ့ ဆိုးရွားလှတဲ့ အနာဟာတစတစပျောက်ကင်းချမ်းသာသွားခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ရက်၊ လ၊ နှစ်ချီပြီး မေမေကြီး တင်းခံ စောင့်စားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့်မေမေကြီးဟာ အရင်တုန်းကလိုမျိုး ချွန်ထက်တဲ့ နှာတံနှင့် စူးရှ တောက်ပတဲ့ မျက်လုံးအစုံကိုတော့ ဆုံးရှုံးရပါတယ်။ အရွယ်နှင့်မမျှအောင် အိုမင်းတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးကို အဲဒီ ရောဂါဘယက ထားရစ်ခဲ့တယ်။ မျက်နှာမှာတွဲရွဲကျနေတဲ့ ခပ်ပွပွနှာခေါင်းနဲ့၊ အတွင်းထဲနစ်ဝင်နေတဲ့ အရောင်မှိန်မှိန်မျက်လုံးတစ်စုံ။ မေမေကြီး အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်ရပြီလား။
အိုတာကဟုတ်ပေမယ့်၊ မစွမ်းတာကတော့ မဟုတ်ရပါဘူး။ အနာရောဂါဖိစီးမှုနှင့်အတူ ရှင်သန် နေထိုင်ရင်း မေမေကြီးရဲ့အနုပညာကို ချွန်ထက်အောင်သွေးခဲ့တာပဲ။ အဲဒီမှာစာအုပ်တစ်အုပ် ထွက်ပါတယ်။ “A Wonderland of Burmese Legend” တဲ့။ နှစ်သက်မြတ်နိုးစရာ မြန်မာစေတီပုထိုးများရဲ့ ပုံပြင်ဒဏ္ဍာရီ တွေပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ထုတ်ဝေပါတယ်။ မေမေကြီးထပ်ဆင့်အောင်မြင်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ မေမေကြီး လက်ရေးနဲ့ မြေးတွေအတွက် အမှတ်တရစာအုပ် ကျွန်တော်တို့မြတ်မြတ်နိုးနိုး သိမ်းဆည်းရပြန်တာပေါ့ လေ။
ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ မေမေကြီးအပြင်ကို နောက်ထပ်အရည်အချင်းတွေနဲ့ မေမေကြီးဖြစ် တယ်ဆိုတာကို ဆရာအထောက်တော်လှအောင်ရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့သောင်းပြောင်း ထွေလာ ရယ်စရာ မဂ္ဂဇင်းမှာ မေမေကြီးကိုစာရေးဖို့ ဆောင်းပါးတွေတောင်းပါတယ်။ မေမေကြီးက သူ့ကို ပျက်ရယ်ပြုတဲ့ ရယ်သွမ်းသွေးတဲ့ သရော်စာဆောင်းပါးတွေရေးပါတယ်။ အဲဒီတော့မှလည်း ကျွန်တော်တို့ က မေမေကြီးမြန်မာလိုရေးတော့လည်း ဟန်ကျပါလားလို့ တွေ့ရတော့တယ်။ အဲဒီကမှဆင့် မေမေကြီးရဲ့ စုဆောင်းသိမ်းဆည်းလေ့လာကျွမ်းကျင်သမျှ အတွေ့အကြုံတွေ၊ အနုပညာတွေကို ဖတ်ရမှတ်ရတော့တာ ပါပဲ။
အဲဒီတော့မှလည်း မေမေကြီးအကြောင်းကို ပိုပြီးသိခွင့်ရခဲ့။ သောင်းပြောင်းထွေလာကစလို့ သဘင်၊ ပေဖူးလွှာ၊ ချယ်ရီ၊ စပယ်ဖြူ၊ လုံမလေး၊ အတွေးအမြင်၊ ပန် စတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ မေမေကြီး စာပြန်ရေးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခင်မျိုးချစ်ရယ်လို့ ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်မိရတာပေါ့။
အော်… မေမေကြီးက ဟိုတုန်းက လုပ်သားပြည်သူ့နေစဉ် သတင်းစာ(အင်္ဂလိပ်) မှ အယ်ဒီတာ လုပ်ခဲ့တာပဲ။ ဟိုတုန်းကပျော်တော်ဆက် မဂ္ဂဇင်းကိုထုတ်ခဲ့ဖူးတာပဲ။ အမျိုးသမီးသတင်းရေးဆရာ၊ စာရေးဆရာအဖြစ်နဲ့ ဟိုတုန်းက၀တ္ထုတွေ၊ ဆောင်းပါးတွေရေးခဲ့ဖူးတာပဲလို့ သတိရပါတယ်။ အရှေ့နှင့် အနောက်ကိုပေါင်းကူးပေးဖို့ မြန်မာလို – ဥရောပစာပေ၊ ဥရောပယဉ်ကျေးမှု အနုပညာမိတ်ဆက်၊ မိုက်ကယ်အင်ဂျယ်လို စတဲ့စာအုပ်တွေ၊ သတင်းစာလောကဆိုတဲ့ စာအုပ်တွေရေးခဲ့ဖူးတာပဲလို့ သိလာရပါတယ်။
ဒါ့အပြင်နောက်ပိုင်းမှာ မေမေကြီးတို့ဆီကို စာရေးဆရာတွေ၊ စာရေးဆရာမတွေ လာကြတွေ့ဆုံ ကြနဲ့ မေမေကြီးတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံဘ၀ဇာတ်ခုံကို ကြားသိလာခဲ့ရပါတယ်။ စာရေးဆရာတွေရဲ့ ၀ိုင်းနားမှာ ကျွန်တော်တို့က ဘေးနားကပ်နားထောင်ရင်း ငယ်စဉ်အခါက မေမေကြီး၊ ဘဘကြီးတို့ ရုန်းကန် လှုပ်ရှားခဲ့တာတွေကို သိမှတ်ခဲ့ရပါတော့တယ်။
ဗိုလ်အောင်ကျော်အရေးအခင်းမှာ မေမေကြီး ကိုလိုနီတွေရဲ့ မြင်းနဲ့နင်း၊ နံပါတ်တုတ်နဲ့ အရိ်ုက် ခံရပုံ နယ်တကာလှည့်ပြီး သခင်မ မခင်မြအမည်နဲ့ တရားဟောခဲ့ပုံ၊ တော်လှန်ရေးမှာ အလုပ်သမား တန်းလျား၌ ရဲဘော်တွေနဲ့ လက်နက်တွေဝှက်ပေးခဲ့၊ လျို့ဝှက်ဆက်သားပြုလုပ်ခဲ့။ ဂျပန်ခေတ်လမ်းဘေးမှာ ဖိနပ်ရောင်းစားသောက်ခဲ့ရတာတွေ၊ အသက်ကြီးမှ ပညာရေးပြန်ဆက်ပြီး လုပ်ကိုင်အသက်မွေးခဲ့။ ခုအချိန် ထိ ကလောင်တံတစ်ချောင်းကို စွဲစွဲမြဲမြဲကိုင်တွယ်ရပ်တည်ဆဲ။ သြော် ငါ့မေမေကြီး အာဂလူပါလားပေါ့။
ဒါပေမယ့် မေမေကြီးနောက်တစ်ဖန် လက်အရိုက်ချိုးခံခဲ့ရပြန်ပေါ့။ “အသရိုက်တစ်(စ)” တဲ့။ လေးဘက်နာဆိုတဲ့ အဆစ်အမြစ်ရောင် ကိုက်ခဲတဲ့ ရောဂါဆိုးကြီး မေမေကြီးကို နှိပ်စက်ဝါးမြိုပါတော့တယ်။ အိပ်ယာပေါ်မှာ ဘုံးဘုံးလဲ၊ အရိုးအဆစ်အသွေးအသားတွေက နာကျင်ကိုက်ခဲလို့ အော်ဟစ်ငြီးညူ၊ နဂိုက ပိန်လှီရတဲ့အထဲ အရိုးပေါ်အရေတင်လို့။ မေမေကြီးကို ကံကြမ္မာက ဘယ်အညိုး အယ်အာဃာတနဲ့လည်း မသိ၊ နှိပ်စက်ကလူပြု၊ ကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့ အမှောင်ကျတဲ့ကာလ၊ မေမေကြီးရဲ့ ငရဲခန်းကာလများ တပတ်ကျော့ပြန်လာ။
ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာ လောကဓံကို မာနကြီးကြီးနဲ့ အံတင်းတင်းကြိတ်လို့ လမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မေမေကြီးအတွက် ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ခုအချိန်မှာလည်းပဲ ရောဂါ ဝေဒနာဆိုးကို ဒေါသတကြီးနဲ့၊ မာနတကြီးနဲ့ မေမေကြီးပြန်လည်ရိုက်ပုတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့။ (၂၄)နာရီ ရှိသမျှ အချိန် အိပ်ယာပေါ်မှာပက်လက်၊ ဘေးကလူတွေဝိုင်းဝန်းနှိပ်နယ်ပြုစုမှ ဝေဒနာကသက်သာရာရရှာ။
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက မေမေကြီးနဲ့ အင်းလျားကန်ဘက် လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တာတွေ သတိရမိတယ်။ ကမာရွတ်လှည်းတန်းအရပ်ကနေ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြောက်ဘက် အင်းလျားကန်ဘက် အထိ ခြေလျင်လမ်းလျှောက်၊ ဘူးသီးကြော်စားပြီးတော့ ၆-မိုင်ခွဲ၊ စွပ်ကျယ်စက်လမ်းထဲက စာရေးဆရာ သော်တာဆွေနဲ့ ကာတွန်းဆရာ ဦးဖေသိန်းအိမ်ဝင်လည်။ ကျွန်တော့်အတွက် ၀တ္ထုစာအုပ်၊ ကာတွန်း စာအုပ်တွေလက်ဆောင်တောင်းပေး၊ အဲဒီအချိန်တွေကို ကျွန်တော်ပြန်ပြီး သတိရမိပါတယ်။ ခုအချိန်မှာ ပြန်စဉ်းစားမိယင်းနဲ့ အိပ်ယာပေါ်က အော်ဟစ်ငြီးညူနေတဲ့ မေမေကြီးကို ကြည့်နေခဲ့မိပါတယ်။ လူ့ဘ၀ ကြီးကို ရခဲလှစွာနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့။ ကိုလိုနီခေတ်ဆိုးနဲ့ ကမ္ဘာစစ်ကြီးဒဏ်အောက်မှ ရုန်းကန်အသက်မွေးမြူ ခဲ့။ မိမိယုံကြည်ရာ၊ ၀ါသနာပါရာကို မဆုတ်မနစ်လုံ့လထုတ်ထူထောင်။ သာမန်ရိုးကျ အမျိူးသမီး တစ်ယောက်အဖြစ်က ထူးချွန်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဒဏ်လောကဒဏ် တွေကြားထဲက လူသားတွေအကျိုး၊ အမျိုးဘာသာ သာသနာအကျိုးနဲ့ မိသားစုအကျိုးတွေအတွက် စိတ်မကွက်ပဲ တတ်နိုင်သလောက်၊ တတ်စွမ်းသလောက် ထမ်းဆောင် သြော်မေမေကြီးရယ် သူနေတဲ့ သက်တမ်းမှာကျန်းမာခြင်းဆိုတဲ့ လာဘ်ကြီးတစ်ပါးချို့တဲ့လှချည်လား။
မျက်နှာမှာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်တုံးက မျက်စိနှင့်လက်နှစ်ဘက်က အကောင်းအတိုင်းရှိနေခဲ့တယ်။ ခု- လေးဘက်နာပြီဆိုတော့ လက်ဆစ်တွေဟာ နာကျင်ကိုက်ခဲတွန့်လိမ်လို့ ဘောပင်၊ ကလောင်တန် ကိုင်လို့မရ၊ တဆစ်ဆစ်နာကျင်နေတဲ့ လက်ထပ်တွေနဲ့ လက်နှိပ်စက်ခလုတ်ခုံတွေကို ထိတို့လို့တောင် မရပါဘူး။ အဲဒီကြားထဲက မေမေကြီးဆက်အသက်ရှင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပြန်တာပါပဲ။
ပါးစပ်ကလိုက်ပြောသမျှ စာရေးဖို့လူတစ်ယောက်ထားတယ်။ အိပ်ယာထဲမှာ လှဲနေရင်းဘေးက စာလိုက်ဖတ်သမျှကို နားထောင်တယ်။ နေကောင်းတဲ့အချိန် ရသမျှလေးမှာ အိမ်အလုပ်တွေရအောင်လုပ် တယ်။ လူကမမာပေမယ့် စိတ်ကိုကျန်းမာအောင်ကြိုးစားပါတယ်။ သူတပါးသနားကြင်နာတဲ့ ဂရုဏာကို ခံယူစားသောက်ရတဲ့ အဖွားအိုကြီးအဖြစ်နဲ့မနေဘဲ မာနကြီးကြီးနဲ့ခေါင်းမာတဲ့ စာရေးဆရာမအဖွားကြီး တစ်ယောက်အဖြစ် ဆက်လက်အသက်မွေး ရပ်တည်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးက တစတစယိုယွင်း။ ခေါင်းမာတဲ့အဖွားကြီးကို ထမ်းစင်နဲ့တင်ပြီး ဆေးရုံ ပို့ရတဲ့အထိ ဖြစ်ပွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ ၁၉၈၈ခုနှစ် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းဆေးရုံကြီးပေါ်မှာ သွေးပိုက်၊ အားဆေးပိုက်တွေတန်းလန်းနဲ့။ ဒါပေမယ့် မေမေကြီးက အသက်ပြင်းပါတယ်။ လေဘာတီမမြရင်ဆိုတဲ့ တုံးကျော်မ သီချင်းလေးအေးအေးနဲ့ မေမေကြီး ပြန်လည်အသက်ရှင်လာတာပါပဲ။
အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေ၊ ဗမာဆေးတွေတန်ခိုး၊ ဘုရားတရားတန်ခိုး။ ပြီးတော့ မေမေကြီးရဲ့စိတ်စွမ်းအင် တွေနဲ့ မေမေကြီးသူ့အလုပ်တွေ သူဆက်လုပ်တာပါပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ “လှတောသာစကားနဲ့ အခြားဗမာ လူမျိုးတွေရဲ့ အာဝဇ္ဇန်းတွေ” ကို ခံစားနားလည်ရယ်မောနိုင်ကြဖို့ အင်္ဂလိပ်လိုစာအုပ်တစ်အုပ် (Gift of Langhter) ပြုစုနိုင်ခဲ့ပြန်တာပါပဲ။
ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်။ မေမေကြီးစွမ်းအင်တန်ခိုးသတ္တိမျိုးကို မြေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ ခြေဖျားတောင်မမှီပါလားလို့ပေါ့။ ဒီလောက်တောင်ကံကြမ္မာက မျက်နှာသာမပေးတဲ့ကြားက လူတွေကို အကျိုးပြုနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကို ကြိုးစားထူထောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ခုဆို အရွယ်ရောက်နေပါပြီ။ ပညာတွေလည်း သင်ခဲ့ပါပြီ၊ မိနဲ့ဘနဲ့ မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေနဲ့ အသက်ရှုနေရပေမယ့် ဘာကောင်မှဘာအလုပ်မှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မလုပ်နိုင်ပါလားလို့ပေ့ါ။ မေမေကြီးနားမှာ အနီးကပ်နေထိုင်ရင်းနဲ့ ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ တည်ရှိ နေခဲ့တယ်။
မေမေကြီးဟာသူနဲ့ သင့်တော်တဲ့နေရာ၊ သူနဲ့သင့်တော်တဲ့အချိန်၊ သူနဲ့သင့်တော်တဲ့အလုပ်ကို တာဝန်သိသိနဲ့ထမ်းဆောင်ပါတယ်။ ဆေးရုံကဆင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ လူငယ်တွေအတွေးအမြင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတတ်ပညာ၊ အသိပညာကျယ်ပြန့်စွာ လေ့လာလိုက်စားဖို့ အားသန်လာကြချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အတွက်၊ လာရောက် မေးမြန်းနားပူဆာတောင်းဆိုကြတဲ့အခါမှာ မေမေကြီးဟာ သူတတ်နိုင်တဲ့ တာဝန်ကို မငြင်းတန်လက်ခံပြီး ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ စာမရေးနိုင်တဲ့ကြားက ကြိုးစားပြီး စာရေးပါတယ်။ လက်ကစာရေးပြီး အသိပညာတွေကို ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ဖို့ အားမရတဲ့အခါ ပါးစပ်က နှုတ်ကနေပြီး စာတွေအများကြီးရေးပါတယ်။ စိတ်ကူးအနုပညာတွေ ဆုံးမသြ၀ါဒအယူအဆတွေ ဖြန့်ဝေ ပါတယ်။
မေမေကြီးလက်တွဲဖော် ရဲဘော်တွေ၊ သက်တူရွယ်တူ စိတ်တူလှုပ်ရှားဖက်တွေ၊ တဖြေးဖြေးနှင့် ခရီးဝေးကြီးတွေ ရွက်လွှင့်သွားကုန်ကြတဲ့အခါ ၀မ်းပမ်းတနည်း စိတ်ထိခိုက်ရပေမယ့် တခါတလေမှာ ဆရာမကြီးလူထုဒေါ်အမာ၊ ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်တို့နဲ့ အချင်းချင်းဖုံးဆက်ပြီး အပြန်အလှန်အားပေး ဆုတောင်း စကားလက်ဆုံပြော ၀မ်းသာကြည်နူးကြရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဘဘကြီးရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကို တနိုင်တပိုင်အိမ်မှာတွင် စာသင်ခုံလေးတွေဝိုင်းပြီး အဖိုးကြီး အဖွားကြီး (၂)ယောက်သားပူးပေါင်းပြီး လက်တွဲလို့လူငယ်တွေအတွက် ဖွင့်ဖြစ်ချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ထင်မြင်မိတာက၊ ခေတ်ဟောင်းကလူကြီး၂ယောက်နဲ့ ခေတ်သစ်လူငယ်တွေ ကွာဟနေလိမ့်မယ်။ ပဋိပက္ခ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့။ သို့ပေမယ့် တကယ်တန်းကြတော့ အမြဲတန်းမှာလူတွေအတွက် အကူအညီပေးချင်လွန်း လို့၊ အမြဲတမ်းကြိုးစားဖြည့်စွမ်းနေတဲ့ လူဆိုတာအရွယ်မရွေး၊ အမြဲတမ်းခေတ်မီသစ်လွင်နုပျိုနေတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
မေမေကြီးဟာ ရောဂါဝေဒနာနှိပ်စက်လို့ လူးလိမ့်အောင်ခံစားရတဲ့ အချိန်တွေမှာအပ ကျန်တဲ့ အချိန်တွေမှာ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်နေထိုင်ပါတယ်။ လေးဘက်နာရောဂါကြောင့် ခြေလက် တွေမသန်မစွမ်းပေမယ့်၊ စိတ်ဓာတ်ကတော့ အမြဲတမ်းကျန်းမာနေတာပါပဲ။ မေမေကြီးသက်သေပြတာက စိတ်ချမ်းသာဖို့ပါ။ အမှန်တရားမြတ်နိုးဖို့ပါ။ သစ္စာတရားကို ရင်ဝယ်ပိုက်ဖို့ပါ။ အဲဒီအတွက် – ရွှေတွေ၊ ငွေတွေ၊ ဂုဏ်ပကာသနတွေ၊ ရာထူးအဆင့်အတန်းတွေ၊ ပြီးတော့ကျန်းမာရေး ဒါတွေနဲ့ အကုန်လဲလှယ်ယူ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူမှာ မေမေကြီးမှာ အကုန်လုံးရပါတယ်။ ခင်မျိုးချစ်ရယ်လို့ နာမည်တလုံးကျန်ရစ် ပါတယ်။
အခုလည်းပဲ မေမေကြီးကို ကံကြမ္မာက နောက်ထပ်လက်သီးတစ်လုံးနဲ့ ထပ်ထိုးပြန်ပါပြီ။ ညာဖက် ခြေထောက်မှာ အပူလောင်လို့ရလာတဲ့ အနာလေးတစ်ခုကနေ အနာကမကျက်နိုင်ပဲ တဖြေးဖြေးကြီးကျယ် လို့၊ အသားမာတွေတက်၊ အသားမာတွေဖဲ့ချ၊ အနာဝကကျယ်လာ၊ အရိုးအထိပေါ်လို့။ အနာကြီးတစ်ခု ဟက်ပက်နဲ့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် မေမေကြီးပြုံးလို့ပါပဲ။
တစ်နေ့ကမေမေကြီးအနာကို ဖန်ဆေးနေတုန်း ကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်နေမိတယ်။ တစ်အိမ်တည်း အတူနေတဲ့ မြေးအဖွားနှစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်အထိတောင်မှ အဆက်ပြတ်နေလိုက်သလဲဆိုရင် ကျွန်တော်က အနာကိုကြည့်ပြီး အံ့သြထိတ်လန့်တုန်လှုပ်၊ မေမေကြီးက ဒါတဖြေးဖြေးပြန်ကောင်းလာတာ လို့တောင် ပြောနေလိုက်သေး။
စာလေးတွေ မတောက်မခေါက်ရေး၊ ကာတွန်းလေးတွေ မတောက်မခေါက်ဆွဲ၊ ပိုက်ဆံရှာဖို့ ပိုက်ဆံရှာဖို့ဆိုပြီး လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် အိမ်မှာနေ့မအိပ်၊ ညမအိပ်၊ ပူလောင် ပြာယာခတ်နေတတ်တဲ့ သူ့ရဲ့မြေးထီးလေးတစ်ယောက်ကို ခုအချိန်ထိ အားပေးချီးကျူးနေတတ်တဲ့ မေတ္တာပို့အမျှဝေနေတတ်တဲ့၊ ဂရုတစိုက်အရိပ်တကြည့်ကြည့် စောင့်ရှောက်နေတတ်တဲ့ မေမေကြီးအတွက် ကျွန်တော်မှာ ဘာမှအမောပြေအောင် သက်သာရာရအောင် ဘာမျှအားမပေးနိုင်၊ ဘာမျှမလုပ်ပေးနိုင်၊ အဲသလိုခံစားမိပါတော့တယ်။
စာအုပ်ပုံတွေကြားထဲက ကုတင်ပေါ်မှာ မေမေကြီးရှိပါတယ်။ အဆစ်အမြစ်တွေ မခံနိုင်အောင် နာကျင်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါ Sosegon လို့ခေါ်တဲ့ဆေးတွေသောက်ရပါတယ်။
ဒီစာကိုမေမေကြီးဖတ်ရတဲ့အခါ Sosegon တစ်လုံးစာလောက်တော့ ဝေဒနာတွေ သက်သာလိမ့် မယ်ထင်ပါတယ်။
(မှတ်ချက် – ဒီစာကို မကွယ်လွန်ခင်က မေမေကြီးဖတ်ဖို့ ရေးခဲ့တယ်။ မဂ္ဂဇင်းမှာ မပါခဲ့ဘူး။ ကွယ်လွန်ပြီးတော့မှ မဂ္ဂဇင်းမှာ ပါခဲ့တယ်။ နောက်တော့ ပိတောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်းကထုတ်တဲ့ ခင်မျိုးချစ်အတွက် အထူးထုတ်လစဉ်မဂ္ဂဇင်းမှာ ပြန်လည်ဖော်ပြခံရပါတယ်။)
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:Maung Yit, လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ, မောင်ရစ်, ဖြစ်ရပ်များ၊ အမှတ်တရများ
One Response to မောင်ရစ် – ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မေမေကြီး
Catwoman on January 9, 2015 at 7:54 am
Thank you for the article. My grandma used to have tine yin may journals and they had articles about your grand parents and grand uncle. I don’t know if it s just the bee sting that started everything. I think it s very treatable. I am not sure if she went to different doctors. I am sorry to hear about her health issues. Burma certainly doesn’t have good wound care or good healthcare.